Dab xooggan oo ka kacay California - Worldnews.com
Kumannaan qof ayaa ka barakacay guryahooda ku yaal koonfurta gobolka California, ka dib markii uu halkaa ka kacay dab ay huriyeen dabaylo xooggan.
Dabka ayaa ka kacay deegaanka Ventura ee waqooyiga Los Angeles, waxaana uu saddex jibaarmay saacadihii lasoo dhaafay.
Dabka California: Madaxweyne Trump oo booqday qasaaraha uu geystay dabki ugu waxyeellada badnaa oo Mareykan ...
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray California si uu u soo indha indheeyo qasaaraha ka dhashay dabka ka kacay gobolkaasi oo ay ku dhinteen 71 qof. Wararku...
BBC News 2018-11-17
Kooxaha samatabixinta oo kumannaan qof guryahooda ka saaray kaddib dab ka kacay California
Kumannaan qof ayaa laga saaray Waqooyiga California iyadoo dabeylo holac wata oo keymaha ka kacay ay ku wajahan yihiin dhowr magaalo oo ku yaalla buuralleyda Sierra ee...
Tirada dhimashada oo koradhay gobolka California iyo dabka oo wali socda
Waxaa sii koradhay tirada ku dhimatay dab xoogan oo ka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka. Tirada ayaa imika maraysa 40 qof oo ku dhimatay dabkan 6 maalmood ka...
Dhulka gubanaya ee California wuxuu ka wayn yahay baaxadda New York
Dabka dhibaatada baaxadda leh ka gaysanaya koonfurta California ayaa u faafay si baaxad leh isaga oo waxyeelo u gaytay dhul ka ballaaran baaxadda ay ku fadhido magaalada...
Dhimashada California oo sare u sii kacday
Tirada dadka la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dabka ka kacay waqooyiga California ayaa gaartay 31 ruux, iyada oo saraakiishu ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii dari karto....
Nin ku dhintay dab ka kacay daarta Trump
Hal nin ayaa ku dhintay afar qof oo kale oo ka mid shaqaalaha dab damiskana waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay daarta dheer ee Trump Tower ee magaalada New York. Shaqaalaha...
BBC News 2018-04-08
Hal nin ayaa ku dhintay afar qof oo kale oo ka mid shaqaalaha dab damiskana waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay daarta dheer ee Trump Tower ee magaalada New York. Shaqaalaha dab demiska ee magaalada New York-na waxa ay la tacaalayaan dabkaasi ka holcaya dabaqa kontonaad ee daarta Trump Tower. Waxa ay waraku sheegayaan in mid ka mid ah dadkii halkaa ku jiray uu ku dhintay, ilaa...
Dabkii California oo weli lala tacaalayo
Mas'uuliyiin ku sugan gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inay weli la dagaalamayaan dab ka holcaya 17 goobood oo kala duwan oo ku beegan aagga uu canabka ka baxo ee waqooyiga magaalada San Francisco. Dab aan sidaa u ballaarnayn oo ka kacay saddex goobood oo kale ayaa la damiyay. Madaxa xakameynta...
​Faahfaahin: Dab ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdishu
MUQDISHU, Somalia - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dab xooggan, oo xalay ka kacay gudaha Suuqa Bakaaraha, ee magaalada Muqdishu, kaasi oo galaaftay hanti badan, oo ay lahaayeen Ganacsato Soomaaliyeed. Dabkan oo billowday xilli dambe oo xalay ah, ayaa si gaar ah waxa uu qabsaday qeybta lagu iibiyo Kabaha, oo ku agdhow halka lagu magacaabo Suuqa Sarifka, waxaana uu ku...
Tobannaan qof oo laga cabsi qabo in dab ay ugu dhinteen California
Tobanaan qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kaddib markii uu dab ka kacay goob ay ka socotay xaflad music oo ku taal magaalada Oakland ee gobolka California ee waddanka Mareykanka. Mas'uuliyiinta ayaa xaqiijiyay geerida 9 qof hasayeeshee waxa ay sheegeen inay isu diyaarinayaan in dhimashadu ay sare u kacdo oo ay gaarto ilaa 40 qof. Dabka ayaa ka kacay...
Dabka California oo sii xoogaysanaya
Dabka halista ah ee hadda ka kacaya California oo dad laayay ayaa sii xoogaysanaya, sida ay masuuliyiintu ka digayaan, inkastoo kumannaan shaqaalaha dab damiska ah ay isku dayayaan in xakameeyaan. "Cimilada oon la saadaalin karin" iyo hawada oo qalalan ayaa horseeday in dabku uu sii xoogaysto Axaddii, sida ay sheegeen shaqaalaha dab damiska. Waa mid ka mid ah siddeed dab oo...